सोधिने प्रश्न - ग्रीन कैम्पिंग उत्पादन कं, लिमिटेड
आफ्नो पाल पनरोक छ?
पाल पनरोक छ कि छैन भनेर मात्र कपडा कति पानी स्तम्भ सम्बन्धित छैन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डिजाइन र कारीगरी छन्। सजिलो सुनिन्छ, तर बजार मा पाल धेरै त्यसो गर्न असफल छ, यसलाई पानी स्तम्भ 5000mm उल्लेख गरे। लागि इनडोर वर्षा परीक्षण उपकरण, यो सम्भव हल्का वर्षा कुनै पनि समयमा आँधी छ बनाउन जो धन्यवाद, यसलाई पूर्ण पनरोक पाल उत्पादन गर्न सक्षम हुन हामीलाई सुनिश्चित गर्न कुनै पनि लीक संभावना पाउन मदत।
कसरी पाल पनरोक बनाउने?
सबै को पहिलो, यदि पाल पनरोक मात्र होइन भौतिक सम्बन्धित छ तर पनि डिजाइन र कारीगरी भर पर्छन्। तपाईं अर्डर राख्न अघि, तपाईं राम्रो बारेमा आफ्नो आपूर्तिकर्ता सोध्न र स्पष्ट जवाफ प्राप्त चाहन्छु।
दोश्रो, तपाईं एक Tarp आफ्नो पाल पनरोक बनाउन एक सेट आफ्नो पाल साथ सँगै हुन सक्छ। कृपया आफ्नो पाल साथ सँगै एक निर्देशन गर्न सम्झना।
कति व्यक्तिका लागि पाल कसरी पहिचान गर्ने?
कसरी परिभाषित गर्न पाल योग्य छ?
सबै को पहिलो, यो जहाँ यो, यस्तो उत्तर अमेरिका बजार मा आगो प्रतिरोध रूपमा बेच्न हुनेछ व्यवस्था यकिन गर्नुपर्छ।
दोश्रो, वेंटिलेशन पर्याप्त छ भने। ISO5912 यो बारेमा आधारित आवश्यकता छ। तर पाल विभिन्न बजार को तापमान अनुसार डिजाइन गर्नुपर्छ।
तेस्रो, पाल पनरोक छ यो पनरोक अनुरोध गर्न डिजाइन बाहेक निश्चित गर्नुहोस्। त्यो आधारभूत आवश्यकता हो तर पाल धेरै यसलाई पूरा गर्न असफल।
निस्कने, बलियो, लचिलो र टिकाउ फ्रेम।
पाँचौं, विभिन्न उद्देश्य निर्भर, यो फरक निर्माण डिजाइन हुन र विभिन्न सामाग्री चयन गर्नुपर्छ। तपाईं कुनै पनि आवश्यकता छ भने, निःशुल्क हामीलाई सम्पर्क लाग्छ।
एक पदचाप, कसरी एक पदचाप प्रयोग गर्न प्रयोग गर्न आवश्यक छ?
पदचाप यस्तो समुद्र तट पत्थर, खम्बा रूपमा तीव्र वस्तुहरु, तपाईंको पाल तल्ला रक्षा गर्न सक्छ। सबै पाल एक पदचाप आवश्यक छ।
पाल अन्तर्गत पदचाप राख्नु गर्दा किनभने पानी हुँदा पानी पदचाप मा प्राप्त गर्न सक्छन् र आफ्नो पाल भित्र चलाउन र पाल को तल्ला भिजेको, तपाईंको बासस्थानमा बाहिर यो भागहरु छैन निश्चित गर्नुहोस्।
तपाईं झोला सुतिरहेको को सिलाई निर्माण को प्रकारको कति थाहा छ? फरक के छ?
आफ्नो सुत्ने झोला को सिलाई निर्माण के? आफ्नो उद्देश्य लागि भनेर फिट राम्रो छ? गर्दैन आफ्नो आपूर्तिकर्ता जो निर्माण प्रत्येक निर्माण को आफ्नो सुत्ने झोला र सुविधाको लागि प्रयोग गरिन्छ तपाईं भन्नुभयो? सामान्यतया, बजार मा2भिन्न निर्माण, को एच कोठामा र डबल एच कोठामा छन्।
को एच च्याम्बर को खोल, इन्सुलेशन सी र सीधा सँगै अस्तर सरल र सबै भन्दा लोकप्रिय निर्माण छ। यो निर्माण सामान्यतया गर्मी-वसन्त मोडेल लागि प्रयोग गरिन्छ
डबल एच कोठामा , कम तापमान सुत्ने झोला लागि प्रयोग सबैभन्दा लोकप्रिय छ। त्यहाँ2अलग पत्रहरू, बाहिरी तह सीना खोल र सँगै इन्सुलेशन को एक तह र भित्री तह सीना अस्तर र सँगै इन्सुलेशन अर्को पत्र, त्यसपछि2तहहरू मिलेर सी छन्। यो डबल एच निर्माण सुतिरहेको झोला न्यानो राख्न थप इन्सुलेशन र एच कोठामा भन्दा राम्रो प्रदर्शन हुन सक्छ। "थर्मल काल्पनिक" संग थर्मल इन्सुलेशन परीक्षण धेरै पछि, हामी त्यहाँ अझै पनि "शीत अंक" हो पत्ता लगाउन, त्यसैले हामी एउटा सुधारिएको डबल एच निर्माण लागू हुन्छ।
सुधारिएको डबल एच चेंबर, as it’s name shows, it’s improved based on double H chamber. The sewing line on double H for both2layers are at same level, thermal will loss through these “cold pints”. In order to solve this problem, we designed this improved double H chamber.
आफ्नो सुत्ने झोला पनरोक गर्छ?
कोही आफ्नो सुत्ने झोला पनरोक छ भन्ने बताउन भने, तपाईं त्यो / त्यो यो लाइन छ भने विचार गर्नुपर्छ। झोला सुतिरहेको गर्नुपर्छ नहीं पनरोक, यो पानी विकर्षक र breathable हुन आवश्यक छ। एक सुत्ने झोला पनरोक छ भने, यो breathable छैन विशेष केही अति उच्च स्तर कपडा हुनेछ। उपभोक्ता पसिना र धेरै असहज महसुस हुनेछ।
हामी तपाईंलाई कुनै पनि समाधान छैन, हाम्रो सुत्ने झोला मा जिप समस्याको लागि धेरै उजुरी छन्?
जिप गुणस्तर सम्बन्धित झोला सुतिरहेको र झोला डिजाइन सुतिरहेको मा जिप प्रदर्शन। हामी धेरै राम्रो गुणवत्ता संग एक जिप छ तर केवल खर्च YKK जिप को 30-40%। कोही आफ्नो जिप राम्रो छ भन्ने बताउन भने, कृपया तपाईँले राम्रो झोला सुतिरहेको मा जिप परीक्षण चाहन्छु मात्र नै जिप परीक्षण छैन।
यसलाई विभिन्न सुत्ने झोला निर्माण र लागि प्रयोग विभिन्न सामाग्री भर पर्छन्। कृपया स्वतन्त्र महसुस तपाईं एक मिसिन धो सुत्ने झोला चाहनुहुन्छ भने हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
गर्छ आफ्नो पिकनिक कम्बल मिसिन धो छ?
हामी मिसिन धो पिकनिक कम्बल छ, तर सबै पिकनिक कम्बल धो mashing छैन। विवरण लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
आफ्नो उत्पादन गुणस्तर कसरी ग्यारेन्टी गर्न? के मापन तपाईं लिएको हो?
गर्छ आफ्नो उत्पादनहरु रासायनिक निःशुल्क र वातावरण मैत्री?
तपाईं बजार मा सबै भन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्छ?
म मात्र मूल्य मा ध्यान भने हामी तपाईंको राम्रो विकल्प सक्छन् लाग्छ। हामी मा राम्रो उत्पादन डिजाइन र राम्रो उत्पादन गुणस्तर आधारित धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान गर्न सक्छन्।
आफ्नो न्यूनतम आदेश मात्रा के हो?
हो, हामी बलियो विकास टीम छ। उत्पादनहरु तपाईंको अनुरोध अनुसार उत्पादन गर्न सकिएन।
आफ्नो भुक्तानी र भुक्तानी उपकरण के छ?
भुक्तानी अवधि: अग्रिम 30% जम्मा, 10 दिन संग बी / एल को प्रतिलिपि विरुद्ध 70% रकम।
भुक्तानी उपकरण: TT, एल / सी, पश्चिमी संघ र Paypal।
ढुवानी लागत तपाईं सामान प्राप्त गर्न छान्ने विधि मा निर्भर गर्दछ। एक्सप्रेस को तेज तर पनि सबै भन्दा महंगा तरिका हो। समुद्र द्वारा ठूलो मात्रा लागि सबै भन्दा राम्रो उपाय हो। कहिलेकाहीं, रेल। ठ्याक्कै हामी मात्रा, वजन र जहाज विधि को विवरण थाह भने मात्र माल दर उपलब्ध छ। थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।